Manomboka amin'ny masaka ka hatramin'ny poach: ny fomba fihinanana atody mahasalama indrindra | Nutri Diet
Miguel Gaton | 07/04/2022 10:43 | sakafo
Ilay atody Iray amin'ireo sakafo mahasalama sy feno indrindra misy: iray amin'ireo tsara indrindra amin'ny sanda ara-tsakafo, azo ampiasaina mandritra ny taona, mora ary ambany kaloria. Noho izany antony izany dia tena ilaina amin'ny sakafo fampihenana lanja na, tsotra fotsiny, rehefa manomana sakafo ara-pahasalamana sy voalanjalanja ho an'ny fianakaviana iray manontolo.
Ankehitriny, toy ny amin'ny ankamaroan'ny sakafo, fomba fahandro atody be dia be ny tian'izy ireo holazaina momba ny kaloria manontolo, ny fihinanana tavy, ary ny fihazonana na fanesorana ny otrikaina.
Ary na dia tsara tarehy aza izy rehetra, ny sasany dia mety aminao kokoa noho ny hafa. Tohizo ny famakiana tsara, fa hahazo zavatra tsy ampoizina ianao.
1 Ahoana ny fomba fahandro ny atody amin'ny fomba mahasalama indrindra?
4 poached na poached
7 amin'ny tortilla
Ahoana ny fomba fahandro ny atody amin'ny fomba mahasalama indrindra?
Mifanohitra amin’ny hevitry ny olona, ny fomba fihinanana atody salama indrindra dia tsy mantafa masaka.
Izany dia noho ny fisian'ny mari-pana ambony dia miteraka tranga antsoina hoe denaturation ny proteinina atody, izay mahatonga azy ireo ho mora levon'ny vatana. Noho izany, ny atleta dia manao fahadisoana mazava amin'ny fihinanana atody manta, satria tsy mahatratra ny vokatra irina.
Miaraka amin'izany, andeha hojerentsika ireo fomba mahasalama mahandro atody. Ao amin'ity lisitra ity dia nodinihinay ny teknika mahazatra indrindra; na izany aza, hatramin'ny Pazo de Vilane, ny toeram-pambolena espaniola tranainy indrindra amin'ny atody malalaka natsangana tamin'ny fahalalahana, manolotra anao ny sasany fomba hafa matsiro sy tany am-boalohany mahandro atody. Naharitra 25 taona mahery ny fiompiana akoho tamin'ny fomba tranainy, ka tsara raha ampiharintsika ny toroheviny.
Raha manana vilany tsy miraikitra tsara ianao dia ity. fomba haingana, matsiro ary mahasalama kokoa ny mihinana atody. Tsy manana fialan-tsiny ianao tsy hampiditra azy amin'ny sakafo maraina, satria 1 minitra ihany no hanomanana azy.
Ao anatin'izany ny fiovaovany samihafa: alona ao anaty rano mandritra ny minitra maromaro na latsaka. Ny tsara amin'ity fomba fahandro atody mahasalama ity dia ny hoe afaka manomana maromaro mialoha ianao ary atsobohy ao rehefa tsy manam-potoana firy. Tetehina ny legioma vaovao dia hahazo sakafo voalohany ianao; atody iray masaka antonony tsy manome afa-tsy 64 kcal.
poached na poached
Ity teknika fandrahoan-tsakafo atody ity dia tena lamaody noho ny atody Benedictine matsiro, sakafo kintana amin'ny sakafo maraina sy brunches matsiro. Na dia manana kalôria vitsivitsy aza ny sauce hollandaise izay matetika miaraka amin'izy ireo, dia tsy mampidi-doza izany raha raisinao tsindraindray ary atao ao an-trano.
Na ahoana na ahoana, ny atody voapoizina na poached ho azy ireo dia matsiro, feno vitamina, mineraly, asidra amine ary proteinina, ary tsy matavy mihitsy (mitovy amin'ny atody andrahoina, eo amin'ny 65 kcal).
Eny, nihevitra ianao fa tsy mahasalama ny atody nendasina… Hanome vaovao tsara ho anao izahay! Marina fa ity fomba fandrahoan-tsakafo ity dia manome kaloria vitsivitsy kokoa (eo amin'ny 110 eo ho eo), saingy tsy dia be loatra izy ireo, ary hosorohanao ny sasany raha tatatra tsara ny atody rehefa esorinao. Ary koa, raha manao izany ianao menaka oliva virjiny fanampiny tsara Tsy hanitra ihany no omenao fa ny fananan'ny EVOO malalantsika rehetra.
Ho an'ity teknika mahandro sakafo ity dia aza misalasala mampiasa ny eritreritrao rehetra. Ary ataovy tsy misy fanenenana miaraka amin'ny sakafo mahasalama sy manankarena indrindra azonao eritreretina: Voankazo voatabiha natoraly, holatra tongolo gasy, makamba sasany, epinara, tonelina, vorontsiloza, katsaka... Satria hahazo cours fanindroany ianao, dia sakafo maraina na sakafo hariva manindrona amin'ny rantsantanana izay mahasalama araka izay azo atao. Zara raha manome 149 kcal ny atody roa tsy misy menaka.
Ny omelette ovy sacrosanct dia kalôria kely kokoa fa tena soso-kevitra. Raha ny marina, raha miezaka mitazona ny tenanao ianao amin'ny vola azonao omena azy matetika. Araka ny filazan'ny Espaniola Nutrition Foundation, ampahany kely amin'ny omelette ovy dia afaka manana 196 kilocalories.
Raha ny tortillas feno na frantsay dia tsy misy olana amin'ny fampidirana azy ireo amin'ny sakafonao saika isan'andro. Ny omeleta frantsay misy atody roa dia mety manana kcal eo amin'ny 154 kcal.
Araka ny hitanao, ny ara-pahasalamana fomba fahandro ny atody dia tena isan-karazany sy matsiro. Raha ny marina, miaraka amin'ny sakafo hafa atolotra dia saika tsy misy farany izy ireo.
Noho izany, aza adino ny mampiditra atody rehefa manomana ny sakafonao sy ny ankohonanao manontolo ianao, fa hanao soa ho anao ny fahasalamanao... sy ny paosinao. Tombontsoa roa!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » sakafo » sakafo » Manomboka amin'ny masaka ka hatramin'ny voanjo: ny fomba fihinanana atody mahasalama indrindra